मिली ९१ ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
Ma ugbu a amara m na Chineke gaemere gị ihe ọ bụla ị ga-arịọ ya ka o mee.”
ỌLU OZI 17:19
Ndị ọkachamara ahụ kpọbatara ya nꞌebe ha zukọrọ, ebe a na-akpọ Ugwu Mas, sị ya, “Bịa kọwaara anyị ozizi ọhụrụ gị.
Nꞌihi na amatara m na ị bụ ọkachamara nꞌihe gbasara iwu na omenala ndị Juu. Biko ana m arịọ gị ka i jiri ndidi gee m ntị.
Anyị nwere onyinye dị iche iche nke e sitere nꞌamara nye anyị. Ọ bụrụ na onyinye gị bụ onyinye ibu amụma, buo amụma dị ka okwukwe i nwere ha.
Ma ana m ede ụfọdụ ihe ndị a nꞌakwụkwọ nꞌihi na amaara m na ihe dị mkpa bụ nanị ime ka unu cheta ha. Nꞌihi na site nꞌamara ahụ Chineke nyere m,
Ka amara Onyenwe anyị Jisọs Kraịst dịnyere unu nile. Amin.
1 KỌRINT 2:6
Otu ọ dị, mgbe ọ bụla m nọ na-ekwuru ndị okwukwe ha siri ike nꞌime Kraịst okwu, ana m eji okwu amamihe gwa ha okwu. Ma okwu amamihe nke m na-ekwu ihe banyere ya abụghị okwu amamihe nke ụwa a, ọ bụghị okwu amamihe nke na-atọ ndị ọkachamara ụwa a ụtọ, nꞌihi na ndị dị otu a aghaghị ịla nꞌiyi.
1 KỌRINT 2:8
Ọ dịghị ọkachamara ọ bụla nọ nꞌụwa a maara ihe banyere nzube a. Nꞌihi na ọ bụrụ na ha maara ya, ha agaraghị akpọgbu Onyenwe otuto ahụ nꞌobe.
Eji m onyinye amara Chineke nyere m tọọ ntọ ala ọrụ a, dị ka ezi onye ọka na-ese ihe osise ụlọ. Ugbu a onye ọzọ amalitela iwukwasị ụlọ nꞌelu ntọ ala ahụ. Ma ka onye ọ bụla kpachapụ anya otu o si ewu.
Ka amara Onyenwe anyị Jisọs dịnyere unu.
Anyị chọrọ ịgwa unu ihe Chineke sitere nꞌamara ya rụpụta nꞌime nzukọ Kraịst nile dị na Masidonia.
Ma mgbe m na-eme ihe ndị a, ọ dị otu ihe mere. Nꞌihi na tupuu a mụpụta m site nꞌafọ nne m, Chineke esitelarị nꞌamara ya họpụta m, ịbụ onye nke ya. O sitekwara nꞌamara ya kpọọ m ka m bụrụ onyeozi ya.
Ụmụnna m, ka amara Onyenwe anyị Jisọs Kraịst dịnyere unu nile.
Chineke egosila anyị ịba ụba nke amara ya. Nꞌihi na ọ maara anyị nke ọma. Ọ na-ewerekwa ihe kachasị mma nye ndụ anyị mgbe nile.
Nꞌihi na echere m na unu nụrụ otu Chineke jiri site nꞌamara ya nye m ọrụ ikwusara unu ozi ọma.
Ka m jiri aka m dee ekele nke m: mụ onwe m Pọl na-ekele unu. Unu echefula na m nọ nꞌagbụ nꞌụlọ mkpọrọ. Ka amara Chineke dịnyere unu.
Ka amara Onyenwe anyị Jisọs Kraịst dịnyere unu.
Ihe dị mkpa ugbu a bụ ịkwụsị ndị na-ezi ihe dị otu a, nꞌihi na ha esitela nꞌihe ha na-ezi weta oke nsogbu nꞌọtụtụ ezinụlọ, meekwa ka ndị na-anabata ihe ha na-ezi lefuo amara Chineke anya. Ndị na-ezi ihe a na-eme ya nꞌihi ego ha na-enweta.
Ndị nile mụ na ha nọ nꞌebe naekele gị. Keleekwara anyị ndị enyi nile, bụ ndị kwere ekwe. Ka amara dịnyere unu nile.
Ka amara Onyenwe anyị Jisọs dịnyere unu nile. Amin.